२०७८ सालको बार्षिक राशिफल हेर्नुहोस – SUDUR MEDIA
२०७८ सालको बार्षिक राशिफल हेर्नुहोस
जानकारी धर्मदर्शन भिडियो राशिफल
March 14, 2021 AdminLeaveaComment on २०७८ सालको बार्षिक राशिफल हेर्नुहोस
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) मेष राशि भएका व्याक्तिहरुका लागी समग्रमा वर्ष २०७८ शुभ रहनेछ । वर्षभरिनै लाभ भाव र राज्यभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको अनुकुल प्रभावले विशेष गरि स्कुल,कलेज,कन्सल्टेन्सि,पर्यटन,होटल व्यावसाय,शेयर बजार र बैक तथा वित्तिय जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ भने व्यापार व्यावसायकै सवालमा लामो दुरिको यात्राको तय गर्न सकनेछ । भाग्यले प्रेमपात्र जुराउनेछ भने माया प्रेम गर्ने जोडिहरुले आफ्नो प्रेम सम्वन्ध विवाहमा परिणत हुनेछ । प्राय वर्ष भरिनै बृहस्पतीको दृष्टि सन्तान भावमा पर्ने हुनाले बंश बृद्धिको गतिलो योग रहेकोछ ।
वर्ष भरिनै राज्य भावमा शनि स्वगृह भएर शश नामको पञ्चमाहापुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले सरकारी नोकरीमा प्रवेश,पदोन्नती तथा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने लामो समय देखिको विवाद अन्य हुनेछ । समाजमा बिशिष्ट तथा उच्च पदाधिकारीसँग घनिष्ट सम्वन्ध बनाई राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले कुटनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गर्ने तथा लामो दुरिको अफिशियल यात्रा हुनेछ ।
कर्मभावमा गोचर गर्ने शनिको अनुकुल प्रभावले कम्प्युटर पाट्स,इलेक्ट्रीक सामान,घर जग्गा,र्ईन्जिन,हार्डवयेर,फेक्ट्री तथा उत्पादन मुखी व्यावसाय विगत भन्दा फस्टाएर जानेछ । त्यस्तै सबैखाले पेशा व्यावसायमा विशेष गरि निर्माण सामग्री,औषधी र गाडी वा ईन्जीन सम्बन्धी सामानको व्यापार व्यावसाय गर्नेहरुका लागी शनिले साथ दिनेछ ।
बिद्यार्थीहरुमा तार्किक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ भने अध्ययनमा एक कदम अगाडी बढि नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । कानुन विषय लिई अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुका लागि न्याय क्षेत्रमा प्रबेश गर्नको लागी समय उत्तम रहनेछ । टेक्नीकल विषय जस्तै मेकानिकल ईन्जिनियर,फार्मेसी,डाक्टर,पाईलट र भुगोल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीका लागी समयले साथ दिनेछ । अध्ययनकै सवालमा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ भने विदेशमा बसेर अध्यययन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । लेखन कला शाहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरुका लागी यो वर्ष उत्तम रहनेछ ।
वर्षभरिनै धनस्थानमा गोचर गर्ने राहु र कष्ट भावमा गोचर गर्ने केतुले भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्दा दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । धन सम्पती फस्ने तथा कुटुम्वसँगको सम्वन्धमा दरार पैदा हुनेछ ।
आर्थिक दृष्टिले असार,असोज,माघ तथा फाल्गुन महिना मेष राशि हुनेहरुका लागी शुभ रहनेछ । मेष राशि भएका व्याक्तिहरुले प्रत्यक मंगलाबार गणेष भगवानको पुजा तथा आराधना गरि गणेष भगवानलाई खुसी बनाउन सके कामहरु समयमा सम्पन्न हुनेछ । राहु केतुको प्रभाव नकारात्मक रहने हुनाले बटुक भैरभको पुजा तथा दर्शन गर्ने र आफ्नो ईष्टदेवको पूजा गर्नाले थप लाभ मिल्नेछ ।
बाकी यहाँबाट भिडियोमा हेर्नुहोस
आज फेरि सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस प्रति तोला कति पुग्यो….
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०२ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १५ तारिख
प्यारी बिनितालाई अमेरिकाबाट आयो यस्तो उपहार, बिनिता यसरी यति धेरै खुशी ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
आज पनि सुनको मूल्य स्थिर ! चाँदी भाउ भने निरन्तर वृद्धि, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ???
मेरो बुढीलाई ट्रक भित्रै क’रणी गर्दा पनि छिमेकी आएन कस्तो पा’पी होला,भर्खरै बाहिरीयो ड’रलाग्दो रहस्य ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..